Faritany eto Madagasikara Info. About. What's This?
Ny Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana Malagasy na FFPLM, dia fiangonana loterana naorin ilay mpiandry Raharinirina Olga izay fantatra amin ny anarana hoe Neny Olga, mpiandry tao amin ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ao Anolaka any Fianarantsoa ny foibeny izay misy ny Toby Lehibe Kanana. Tamin ny 13 Avrily 2013 no nijoro ara-panjakana ny FFPLM raha tany amin ny taona 2008 no efa nisy ny tsy fifanarahana tamin ny FLM. Mampiasa ny fihirana FFPM sy ny litorjia loterana malagasy ny FFPLM. Ao amin ny Toby lehibe Kanana ao Fianarantsoa i Neny Olga no miasa. Maro ny olona mirotsaka ho mpiandry k ...
Ny Faritra Ihorombe dia iray aminireo faritra 22 eto Madagasikara, ao aminny Faritanini Fianarantsoa no misy azy, ao atsimonny Nosy. Ihosy no renivohiny. Manana velarana de 26 391 km 2 io faritra io. Ao aminny Faritra Ihorombe no misy ny tangoron-tendrombohitri Isalo. Midadasika ao koa ny platô Ihorombe ao andrefana. Ny tapany atsimonny tangoron-tanedrombohitra Andringitra koa dia ao anatinny taninIhorombe. Ireto ireo distrika telo ao aminny Fartra Ihorombe: DistrikanIhosy DistrikanIakora DistrikanIvohibe
Ny Faritra Anosy dia iray aminireo faritra 22 eto Madagasikara, ao aminny Faritanini Toliara, any aminny tapany atsimo atsinananny Nosy. I Tolagnaro na Fort-Dauphin no renivohiny. Manana velarfan-tany mirefy 25 731 km² izy. Ireto ny distrika mandrafitra ny Faritra Anosy: DistrikanAmboasary-Atsimo Distrikani Tolagnaro Distrikani Betroka
Ny Faritra Androy dia iray aminireo faritra 22 eto Madagasikara. Ao aminny Faritanini Toliara ao atsimonny Nosy no misy azy. Ambovombe ny renivohiny. Manana velaran-tany mirefy 19 317 km 2 io faritra io. Saro-dalana izy sady maina tsy ampy rano. Ny vahoaka antandroy no mponina betsaka ao. Avy amin ny anaran ny zavamaniry hoe roy ny anaran io faritra io. Ireto ireo distrika efatra mandrafitra ny Faritra Androy: Distrikani Tsiombe Distrikani Beloha DistrikanAmbovombe Distrikani Bekily
Ny Faritanin i Fianarantsoa dia faritany iray amin ny enina eto Madagasikara Tamin ny taona 2011 izy dia nanana velarana 103 272 km2 sy mponina 4 142
I Madagasikara dia nosy lehibe ao amin ny Ranomasimbe Indianina. Nosy fahefatra lehibe indrindra eto an - tany izy. Any amin ny ila - bolan - tany atsimo
Ny Faritanin Antsiranana dia iray amin ireo faritany enina eto Madagasikara izay manana velarana mirefy 43 406 km2. Misy mponina 1 465 606 izy tamin
I Matsiatra Ambony dia faritra eto Madagasikara ao anatin ny faritanin i Fianarantsoa. Mizara ho distrika fito ny faritra Distrikan Ambalavao Distrikan Ambohimahasoa
Ny faritra Atsimo - Atsinanana dia faritra eto Madagasikara ao anatin ny faritanin i Fianarantsoa. Ny faritra Atsimo - Atsinanana dia mizara ho distrika dimy
amin ireo faritra 22 eto Madagasikara Ao amin ny Faritanin i Mahajanga no misy azy, any amin ny tapany andrefan i Madagasikara Mifanefitra tany amin
Ny Faritanin i Toliara dia anisan ireo faritany enina eto Madagasikara Izy no faritanin i Madagasikara lehibe indrindra raha ny velarana no jerena
Ny Faritanin Antananarivo dia faritany malagasy misy ny renivohitr i Madagasikara Ny velarantaniny dia 58 283 km2. Ny isa - mponiny dia misy 4 580 788
Antsiranana, any avaratr i Madagasikara Ny renivohiny dia Sambava. Ny faritany dia ao amin ny amorontsiraka avaratra atsinanan i Madagasikara Izy io dia mizara
Faritra Atsimo - Andrefana no faritra lehibe indrindra amin ny velarantany eto Madagasikara izay any amin ny tapany atsimo andrefan ny Nosy. Ao amin ny Faritanin i